Yintoni “Ukutya okuCwangcisiweyo”? - Galveston County Food Bank
Igama "ukutya okucutshungulwayo" kuphoswa phantse kuwo onke amanqaku ezempilo kunye nebhlog yokutya onokuyifumana. Akuxoki ukuba uninzi lokutya olufumaneka kwiivenkile zokutya namhlanje kukuqhubekeka kokutya. Kodwa zintoni ezo? Sazi njani ukuba zeziphi ezifanelekileyo zokuzisebenzisa kwaye zeziphi ezingenampilo? Nasi isikhokelo esikhawulezayo kwinto eziyiyo kunye nezo zinesondlo xa zithelekiswa nokutya okunesondlo okunesondlo
“Ukutya okwenziweyo” kuko nakuphi na ukutya okuphekiweyo, okusemathinini, okupakishiwe, okusikiweyo ngaphambili, okanye okwandisiweyo ngeencasa ngaphambi kokuba zipakishwe. Ezi nkqubo zitshintsha umgangatho wokutya okunesondlo ngeendlela ezahlukileyo kungenxa yoko xa uthenga ukutya okuphekiweyo kwasekuqaleni kubi kakhulu kunesondlo kunokuba ubunokupheka ngokwakho. Ukutya okubandayo kuya kuba neekhemikhali zokulondoloza, iswekile kunye netyuwa kongezwe kubo ukongeza incasa kwaye kubenze kube lula ukupheka kunye nokunencasa. Kwelinye icala, unokuba nesipinatshi esiphekiweyo okanye usike iinanapple kwaye awulahli iimpawu zesondlo nangona zithathwa njenge "zilungisiwe".
Okusempilweni kokutya okucwangcisiweyo kuya kuba kuko nakuphi na ukutya okungenayo nayiphi na into okanye okuqulathe izongezo ezimbalwa. Imveliso ebotshiweyo, iziqhamo ezinqiniweyo, imifuno enkonkxiweyo, intlanzi enkonkxiweyo, ubisi kunye namandongomane zezinye zezona zinto zisempilweni kuko konke ukutya okusetyenzisiweyo. Abanye abantu abanalo ukhetho lokuthenga imveliso entsha endaweni yeekhonkxiweyo ngenxa yezizathu zemali, ke musa ukuziva unetyala ukuba ukutya okusemathinini kulungele uhlahlo-lwabiwo mali kunye nendlela yokuphila engcono. Zama ukuthintela izinto ezinamathanga eziye zongeza ityuwa kunye neswekile ukugcina umgangatho wokutya okunesondlo kukutya okuphezulu. Kuyinyani ukuba uninzi lwabantu abadala luxakeke kakhulu kwezi ntsuku kwaye ukukhulisa yonke imveliso yakho ayisiyonyani. Ukuba kunjalo kuwe, ukusikwa kwangaphambili okanye imveliso yangaphambi kokuhlamba ayisiyonto emele ukungahoywa ngenxa yokuba ithathelwa ingqalelo.
Ukutya okucutshungulwayo okuncinci: ukutya kweenja ezishushu, inyama yesidlo sasemini, iitshipsi zeetapile, iidiphu zokutya, ukutya okubandayo, ukutya okuziinkozo, ii-crackers, kunye nezinye izinto ezininzi. Uninzi lwezinto ezivenkileni, ezinje ngeicookie eziphekiweyo okanye ii-crackers ezinencasa, zicutshungulwa ngakumbi kunokuba ziyinyani. Kukho izithako ezimbalwa "zokwenene" kwezi mveliso kwaye iikhemikhali aziqhelekanga kwimizimba yethu. Esi sizathu sokuba ukutya okwenziwe kakhulu, ngaphandle kwexabiso lesondlo, akulunganga ukuba sikutye rhoqo. Ukucinga ukuba siyakuphila ngaphandle kokutya ezo ntlobo zezinto akunangqondo yiyo loo nto kucetyiswa ukuba sizisebenzise ngokumodareyitha. Ukutya ii-cookies esele zibekiwe kanye ngenyanga endaweni yemihla ngemihla, okanye iisiriyeli zesidlo sakusasa ezineswekile kanye ngeveki endaweni yemihla ngemihla lutshintsho olukhulu ukuzama nokwenza. Isizathu sokuba, umzimba wakho uphendule ngokuthe ngqo kwizinto zokutya "eziyinyani" kunazo zonke iikhemikhali eziqulethwe zizinto zokutya. Ukutya okuqhubekekayo kunxulunyaniswe nokutyeba kakhulu, uhlobo lwesibini lweswekile, i-cholesterol ephezulu, uxinzelelo lwegazi oluphezulu, kunye neminye imihlaza. Ziyingozi kakhulu kwimpilo yethu kwaye kufuneka zinqunyelwe kwizidlo zethu.
Ukutya okwenziweyo kuyathandwa kwiivenkile zanamhlanje kunye nentengiso kangangokuba kunzima ukuziphepha. Kodwa ukwazi ukuba ziyintoni kwaye kuyingozi kangakanani kwimpilo yethu kunokuba kubaluleke kakhulu. Olu lwazi lunokukunceda uhambe ngendlela enexabiso lesondlo kwaye ungenalo. Ndiyathemba ukuba oku kube luncedo kakhulu ekutyeni okusetyenzisiweyo, zeziphi izizathu zokuba kubekho intetho engako ngazo.
egqithileyo ngeposi Previous: Imigaqo yeMpilo yaBantu abaDala
Okulandelayo elilandelayo: Isaladi yePasto yenkukhu